Onye ọrụ Lynn Stafford
Daalụ, Doug. Onye ọkwọ ụgbọ ala m na-aga nzukọ abụrụla ndị na-ekwu okwu dị mma. N'ọtụtụ oge m na-ahọrọ ịnọ n'ụlọ, echekwara m ọtụtụ puku dollar site na ịzụta akwụkwọ ha naanị - akwụkwọ ndị ahụ nke mere ka ndị ha ruru eru. O doro anya na ọ bụrụ na nke a abụghị ihe dochie anya ahụmịhe ahụ na ịkparịta ụka n'…ntanet… ọ kwesịrị ka a tụlee ya. N'ihi ya, enwere m mmetụta na enwere m akụ na ụba miri emi nke m nwere ike ịga leta ugboro ugboro.